त्यसो त जहिलेबाट अहिलेको नेपाल एउटा राज्यको रूपमा स्थापित भयो, त्यसबेलादेखि नै यसको आफ्नो सार्वभौमिकता अविच्छिन्न रहँदै आएको छ । अन्य मुलुकको इतिहासमा जस्तै नेपालको सन्दर्भमा पनि बेला–बेला केही भूभाग थप प्राप्त गर्ने र गुमाउने कार्य भएको त इतिहासमा छँदैछ । तसर्थ नेपाल देश त जुन बेलादेखि बनेको हो, यो सधैं छँदैछ र जे चिज सधैं छ, त्यसको पुनरागमन हुँदैन ।
यूएस बंगलाको विमान सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा त्यसमा सवार ५१ जनाले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो भने विमानमा रहेका २० जना घाइते छन् ।
२ वर्षअघि छोरा पोषण विषय लिएर स्नातक गर्न क्यालिफोर्निया र ८ महिनाअघि छोरी पूर्ण छात्रवृत्ति पाएर पत्रकारिता विषयमा १० महिने स्नातकोत्तर गर्न न्युयोर्क गएकाले हामी अभिभावकलाई छोरीले आफ्नो दिक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन बोलाइन् र हामीले आवेदन दियौं ।
एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र माओवादीको एक्काइसौं शताब्दीको जनवादबीच समन्वय नभएर यी दुई दलको एकता अड्केको समाचार धेरैको आँखा परेको होला । यी दुई बीचको मूर्त सैद्धान्तिक फरक कसैले प्रस्ट्याएको छैन ।
मुलुकले पहिलोपटक तीन चौथाइ समर्थनको शक्तिशाली सरकार पाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अधिकांश दलले विश्वासको मत दिँदा प्रतिपक्षमा नेपाली कांग्रेस एक्लै परेको छ ।
भर्खरै प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री बनेका शेरधन राईले आफ्नो प्रदेशलाई साँच्चै समृद्ध बनाउने उद्घोष गरेका छन् । उनले भनेका छन्, जलविद्युतको क्षेत्रमा हाम्रो प्रदेश निकै धनी छ । त्यसतर्फ प्रदेशको ध्यान जानुपर्छ । उनले भनेजस्तै प्रदेश नं. १ मा जलको सम्भाव्यता निकै छ ।
खाने तेल उत्पादनका लागि प्रख्यात ‘ख्वना’ (खोकना) आजभोलि अशान्त छ । एकातिर नेपाली सेना एक्स्काभेटरसहित तैनाथ छ । अर्काेतिर ‘ख्वनामि’ (खोकनावासी) ब्यानर र प्लेकार्डसहित धर्नामा खटिएका छन् । एकातिर छ राष्ट्रिय सेना, अर्काेतिर छन् स्थानीय जनता ।